Iindawo eziMbi kakhulu zeNdlu kunye nendlela oyifumana ngayo
AmaHlathi okuHlaba kwabantu kunye nendlela Owafumana ngayo
Nangona i-tapeworm yabantu abadala ibuhlungu, xa ikwazi ukufikelela kumgangatho omdala ukuba ibangele iingxaki kubantu. SCIEPRO / Getty Izithombe
Iipasasiti zabantu zizinto ezithembela kubantu ukuba ziphile, kodwa anikezeli nantoni na enhle kubantu abachaphazelayo. Ezinye izigulane azikwazi ukuhlala ngaphandle komntu, ngelixa ezinye zilungelelanisa, zithetha ukuba ziya kuhlala zihlala kwenye indawo, kodwa zenze ntoni xa zifumana emzimbeni. Nalu uluhlu lwabantu abanobubi-iipasisiti kunye nenkcazo yendlela ofumana ngayo kunye noko bayenzayo. Nangona nayiphina imifanekiso ye-parasite yenza ukuba ufuna ukuhlamba nge-bleach, imifanekiso eluhlu luyinkliniki kunokuba ivule. Awunakugijima ukumemeza kwiskrini (mhlawumbi).
IPlasmodium kunye neMalaria
I-malaria i-merozoites ekugqibeleni iphule iiseli ezibomvu zegazi, isasaza iipasisiti ezininzi. I-KATERYNA KON / SCIENCE I-PHOTO LIBRARY / I-Getty Izithombe
Kukho iziganeko ezimalunga nezigidi ezingama-200 ze-malaria unyaka ngamnye. Nangona ulwazi oluqhelekileyo lwe-malaria ludluliselwa ngutulu, abaninzi abantu bacinga ukuba yintsholongwane yegciwane okanye ibhaktheriya. I-Malaria iyabangela ukusuleleka kwintsholongwane yeprotozoan ebizwa ngokuthi iPlasmodium . Nangona isifo asibukeli njengento enyanyekayo njengentsholongwane ye-parasitic, intsholongwane kunye nezikhukhula ziyakwazi ukuqhubela phambili ekufeni. Kukho unyango lokunciphisa umngcipheko, kodwa akukho gonyo. Ukuba yenza uzive ungcono, thuthuzela ukwazi i-malaria inokunyangwa ngamayeza anamhlanje.
Indlela oyifumana ngayo
I-Malaria iqhutywe yi- Anopheles umlingo. Xa umlumzana wesifazane uyakumaza (abesilisa abalimi), i- Plasmodium enye ingena emzimbeni ngamathambo omsi. Umzimba owodwa owenziwe ngefowuni wanda ngaphakathi kweeseli ezibomvu zegazi, ekugqibeleni ubangele ziqhube. Umjikelo ugqitywa xa umlingo uluma umlindi ogulayo.
Imbekiselo: Iphepha leMalariya, i-World Health Organisation (ifunyenwe 3/16/17)
I-cylinder ye-tapeworm ebuchosheni, i-MRI scan. ZEPHYR / Getty Izithombe
Ii-Tapeworms zihlobo lwe-flatworm. Kukho ezininzi iintlobo zee-tapeworms kunye nemikhosi eyahlukeneyo yee-parasites. Xa uginya amaqanda okanye ifom ye-tapeworms, idibanisa kwisibini sesigxina, sikhule, kwaye siqokelele ukugawula amacandelo abo okanye amaqanda. Ngaphandle kobunzima kunye nokulahla umzimba wezondlo ezithile, olu hlobo losulelo lwe-tapeworm alukho nto enkulu. Nangona kunjalo, ukuba imimiselo ayifanele ukuba izibungu zikhule, zenza i-cysts. Ama-cysts angathutha naphi na apho emzimbeni, elindele ukuba ufe kwaye ngokuqinisekileyo uyadliwa yilwanyana elinegulane efanelekileyo ngokugqithiseleyo. I-cysts ibangela isifo esibizwa ngokuba yi-cysticercosis. Usulelo lubi kakhulu kwezinye izitho kunabanye. Ukuba ufumana i-cysts kwingqondo yakho, kunokukhokelela ekufeni. Iimpawu kwezinye izitho zingafaka uxinzelelo kwiisisindo kwaye zithintele izondlo, ukunciphisa umsebenzi.
Unokufumana ii-tapeworms ezininzi iindlela ezahlukeneyo. Ukutya izilwanyana ezinobuncwane obugqatswanga ngokungalunganga kunye ne-cress water, ukutya inyama yengulube, ukudla i-sushi, ukutya ngengozi, ukusela ingozi okanye ukusela amanzi angcolileyo.
I-Worms Worms ne-Elephantiasis
UJohn Merrick, Indoda Yendlovu, uhlala kwindawo efanelekileyo emva kwesihlalo ukubonisa ukukhubazeka obangelwa yisifo sakhe, i-Neurofibromatosis. I-Corbis ngokusebenzisa i-Getty Images / Getty Izithombe
I-World Health Organisation iqikelela ukuba abantu abangaphezu kwezigidi ezili-120 banesifo seengqungquthela ze-filaria, uhlobo lwesigubhu. Iimbungu zikwazi ukugubha izitya ze-lymphatic. Esinye sezifo ezingabangela ukuba sibizwa ngokuthi i-elephantiasis okanye "Indlovu yeMfo yezifo". Igama libhekisela kwisiqhwaba esikhulu sokuvuvukala kunye nesisu esiphumela xa kukho umlambo we-lymphatic ungenakucima kakuhle. Iindaba ezilungileyo kukuba abantu abaninzi abanentsholongwane yee-filaria babonisa ukuba akukho nantsingiselo yokusuleleka.
Ukutshatyalaliswa kwe-Roundworm kwenzeka ezininzi iindlela. Ama-parasites anokungena phakathi kweeseli zesikhumba xa uhamba ngotshani obunamanci, ungasiphuza emanzini akho, okanye unokungena ngokuluma kwimiyane.
Tyikitye i-Australia Paralysis
Iikitikithi zi-parasites ezithwala izifo ezahlukahlukeneyo. Seraficus / Getty Izithombe
Iikitikithi zibhekwa njenge-ectoparasites, oku kuthetha ukuba benza umsebenzi wabo ongcolisayo ongekho emzimbeni ngaphandle komzimba. Ukuluma kwabo kungadlulisela izifo ezinobungozi, ezifana nesifo seLyme kunye neRickettsia, kodwa ngokuqhelekileyo akuyiyo ikiti ngokwayo ebangela ingxaki. Ngaphandle kwe-Australian tick disability , i- Ixodes holocyclus . Eli phawu lithatha iziqhelo eziqhelekileyo zezifo, kodwa unokuzibona unethamsanqa ukuba uhlala ixesha elide ukufumana. Umngcipheko wokukhubazeka uvimba i- neurotoxin ebangela ukukhubazeka . Ukuba i-toxin iphazamisa imiphunga, ukufa ngenxa yokuhluleka ukuphefumula kungaholela.
Iindaba ezilungileyo nguwe kuphela uhlangabezana naloo phawu e-Australia, mhlawumbi xa ukhathazeka ngakumbi ngeenyoka kunye neengcungcuthe ezinobungozi. Iindaba ezimbi kukuba, akukho-antivenom ye-toxin yekiti. Kwakhona, abanye abantu bahlaselwa kwi-tick bite, ngoko banendlela ezimbini zokufa.
I-Sarcoptes enye ye-scabiei mite yimbangela yesifo sosuleleko lwe-Skin scabes. I-mite igxobhoza phantsi kwekhumba lomninimzi, kubangele ukugubha kakhulu. ISayensi yeZithombe Co / i-Getty Izithombe
I-scabies mite (i- Sarcoptes scabiei ) isondlo sekhaksi (zombini i-arachnids, njengezigulane), kodwa le minyango iqhuba elukhumbeni kunokuba ibetha ngaphandle. I-mite, i-feces yayo, kunye nokucaphuka kwesikhumba kuvelisa i-bumps ebomvu kunye nokukhwaza okukhulu. Nangona umntu osulelekileyo uza kuhendwa ukuba ahlambele isikhumba sakhe, le nto ingengcamango embi ngenxa yokuba isifo sesibini esiphumela sisenokungathanga. Abantu abanesistim somzimba esibuthakathaka okanye uvakalelo kwiimitshato banokuvelisa imeko ebizwa ngokuba yi-scabies yaseNorway okanye i-scries. Ulusu luba lukhuni kwaye lube lukhuni kwiintsholongwane ngezigidi zezibungu. Nangona isifo sinyanga, ukukhubazeka kuhleli.
Le nambuzane idluliselwa ngoqhagamshelwano nomntu ogulayo okanye izinto zakhe. Ngamanye amazwi, jonga abantu abathandayo kwizikolo kunye nawe kwii-plane kunye neetreni.
Screwworm Fly kunye neMyiasis
Iimvumba ze-screwworm ziyaqhela inyama yabantu. Malte Mueller / Getty Izithombe
Igama lezesayensi leNew World screwworm nguCochliomyia hominivorax . Inxalenye ethi "hominivorax" inxalenye yegama lithetha "ukutya abantu" kwaye yinto ecacileyo yilezi zimpethu zale ntambo. I-fly fly ijikeleze iikisi ezilikhulu kwilonda elivulekile . Ngengomso, amaqanda aphanga amaqabunga asebenzisa imihlathi enqabileyo ukuba iqhube yinyama, eyisebenzisayo njengokutya. I-maggots igxobhoza nge-muscle, imithana yegazi kunye neentsholongwane, ikhula lonke ixesha. Ukuba umntu uzama ukususa izibungu, ziphendula ngokumba ubunzulu. Kuphela malunga nama-8% abantu abasulelekileyo bafa ngenxa ye-parasite, kodwa baxhwabazeka ngokudliwa ngokusemthethweni, kunye nomonakalo wesisu kunokubangela ukusuleleka kwintsholongwane.
I-screwworm eyayisetyenziselwa ukufunyanwa e-United States, kodwa namhlanje kufuneka uvakashele eMbindi okanye eMzantsi Melika ukuba uhlangabezane nayo. Ngaba unxeba elivulekile? Kungcono ufumane i-bandage!
Iiprogram ze-Biology eziphezulu kwiiYunivesithi zase-US
Funda igama lesiJapane elithi Yuuki
Iimvavanyo zisebenza njani kuMculo
I-Calvin Cycle Steps kunye neDiagram